नेपाल प्रहरीमा ३ सय ६० जनालाई जागिर खुल्यो (हेर्नुस् सूचना सहित) – AB Sansar
नेपाल प्रहरीमा ३ सय ६० जनालाई जागिर खुल्यो (हेर्नुस् सूचना सहित)
November 8, 2020 adminLeaveaComment on नेपाल प्रहरीमा ३ सय ६० जनालाई जागिर खुल्यो (हेर्नुस् सूचना सहित)
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ३ सय ६० जनशक्ति माग गर्दै नयाँ भर्ना खुलाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवस्रोत भर्ना एवम् प्रशासन विभागले विज्ञापन खुलाएको हो। विभागले कार्यालय सहयोगीका रुपमा भान्छे, माली, हजाम, सिलाइबुनाई, कुचीकार र खेलाडी गरी ३ सय ६० जनशक्ति माग गरेको हो। १८ वर्ष उमेर पुरा भई २५ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्नेछन्।कार्यालयका अनुशार ९ जना माली/बगैंचे, २ सय ६१ जना भान्छे, १० जना हजाम, १५ जना सिलाइ÷बुनाइतर्फ, ५० जना कुचिकार र १५ जना खेलाडीका लागि माग गरिएको छ ।****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
खेलाडि सहयोगीतर्फ १५ जनामा फुटबल, भलिबल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, जुडो, कराँते, तेक्वान्दो, उसु, ब्याडमिन्टन, बक्सिङ, भारोत्तलन विधातर्फका महिला/पुरूष खेलाडीले मात्रै दरखास्त दिन पाउँछन्। खेलाडीतर्फ दरखास्त दिनेले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा मात्रै दरखास्त बुझाउन पाउँछन् भने अरूका लागि ७७ जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाटै दरखास्त दिन सकिन्छ।
योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले पुस ६ गतेसम्म ७७ वटै जिल्लाका प्रहरी कार्यालय र प्रदेशका विभिन्न तालिम केन्द्रहरुबाट आवेदन दिन सक्ने छन्। ****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
परिक्षा नजिकिदै गर्दा कक्षा १२ का विद्यार्थीहरुलाइ एकाबिहान आयो अत्यन्तै जरुरी सूचना !
आजको दिन एउटा संघर्षशील आमाको जन्म !
हारको सबै दोष मेरो हो । मेरो अनुरोध छ, खेलाडीलाई दोष दिनु पर्दैन’
June 8, 2021 Admin01
जिउँ’दो ला’श’ बनेको ३ वर्षपछि पुनर्जीवन पाउने आशामा निशा घिमिरे !